Huawei jikọtara ya na ihe atụ nke foto nke foto P9 | Gam akporosis
Huawei wepụrụ foto ihe atụ nke foto P9, were ya na igwefoto $ 4.500
Azụmaahịa na-arụ ọrụ aghụghọ mgbe ụfọdụ gosipụta ezi ihe ngwaike nke ekwentị, na nke a, ọ nwetabeghị aka maka Huawei. N'ahịa asọmpi a dị oke egwu nke nkọwa ụfọdụ nwere ike ime ka mmadụ pụọ na asọmpi ahụ, ịpụ n'ahịrị nwere ike inwe nsonaazụ ọjọọ ma ọ bụ kpatara nke ebumnuche mbụ: mgbasa ozi ọjọọ.
Anyị agaghị eme ebubo ma ọ bụ nkatọ, kama ọ bụ naanị iji gosipụta eziokwu ma hapụ ka onye ọ bụla chee ihe ọ chọrọ. Ma ọ bụ na ụbọchị ole na ole gara aga, Huawei bipụtara ihe dị ka a foto ejiri P9 iji gosiputa oke ihe eserese a n’enye nnukwu ekwentị. Ruo ezigbo mma, ihe na-eme na onye kesara foto ahụ site na Google+, amaghị na netwọkụ mmekọrịta a na-eme dị ka Flickr, ọ na-echekwa EXIF ​​metadata nke igwefoto na ntinye ọ bụla ewepụtara.
Foto ahụ dị ịtụnanya n'ezie na ọkwa dị oke mma Nke a nwere ike ịkpali onye ọ bụla iche echiche iji dochie ekwentị ha iji nwee uru iji ụdị foto ndị a na igwefoto nke Huawei P9 ha. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na mmadụ elekwasị anya na nkọwa ndị ahụ, ebe ọ bụ na esere foto n'otu ụbọchị mgbe ọkụ malitere ịkọ ụkọ, ọ nwere ike na-enyo enyo, ma ọ dịkarịa ala, na-elele metadata ahụ iji hụ ma ejiri ya ọkọlọtọ nke onye nrụpụta China.
Ọ dị oke mma ịbụ eziokwu ruo otu lee data EXIF nke foto:
Igwefoto: Canon EOS 5D Mark III
Anya: EF70-200mm f / 2.8L B II II USM
Ọnọdụ ogologo: 135mm
Ihe ngosi 1/800
F Nọmba. f / 4
Flash: ejighi ya
Ngosipụta Ngosipụta: -1 EV
A Canon 5D Mk.III na-efu $ 2.600 na Amazon na EF70-200 f / 2.8L B II II USM oghere ọ gara $ 1.900. Kpamkpam anyị na-ekwu maka igwefoto $ 4.500. Ederede nke soro ntinye na Google+ n'oge ọ bụla na-ezo aka na onyonyo ahụ jidere ya na P9, ọ bụ ezie na egwu egwu n'okwu ọ nwere ike ịdaba na ị nwere ike ikwenye na Huawei P9 na-ese foto nke ụdịdị a. Ederede bụ nke a:
Anyị abịa na-a mara mma ọwụwa anyanwụ na Deliciously Ella. Igwefoto Leica nke abuo # HuaweiP9 na-eme ka agbapụ na ọnọdụ ọkụ dị ala. Ibido foto site na ama ma kesara gị ọwụwa anyanwụ ihe oyiyi na anyị. #OO
Ọ dịghị ebe Huawei kwuru na P9 were foto ahụ ozugbo. Ihe ha choro ka ha sonye bu ihe igwefoto abuo nke P9 Leica, ma obu ebe a ahịa dị ọcha na-abanye iji mee ka onye ọrụ megharịa ya anya wee mepụta omume ọma na uru nke mmewere nke ngwaahịa ha chọrọ ire. N'ehihie ụnyaahụ Huawei kwupụtara:
Emeela ka ọ pụta ìhè na onyonyo e bipụtara n'otu n'ime ọwa mgbasa ozi anyị a gbapụtaghị ya n’ezie ya na Huawei P9. Ihe oyiyi ahụ, nke e weere na nke ọkachamara mgbe ọ na-esepụta mgbasa ozi maka Huawei P9, bụ nke ekesara iji kpalite obodo anyị. Anyị ghọtara na anyị kwesịrị ime ka ihe doo anya n'ihe metụtara onyinyo a. Ọ bụghị nzube anyị ka anyị nwee mgbagwoju anya. Anyị na-arịọ mgbaghara ma anyị ewepụla onyonyo ahụ.
N'ezie Huawei ị chọghị nke ọ bụla n’ime ihe ndị a Iji ree ekwentị ha, ha nwere ike ịbịaru Apple na Samsung nso na ahịa, mana ike ha adịgogogoro ọtụtụ afọ na ọ bụrụ na ha enwee ezigbo nkwado afọ na afọ, ha ga-enweta ọtụtụ mmadụ chọrọ igwe ha. Ihe adịghị anakwere bụ ụzọ ahụ nke mgbagwoju anya, yabụ ka anyị nwee olileanya na ha ga-amụta ma ghara iwere foto ndị ọzọ na kamera $ 4.500.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei wepụrụ foto ihe atụ nke foto P9, were ya na igwefoto $ 4.500
Onye tufuru oru ya, abughi m ika ma obu onye ama ama, tupu ibunye foto m kesara ya na ngwa na ewepu metadata. Enwere onye nzuzu obula n'uwa a ...
Ọ gbaghaa kpam kpam ...
Ha kwesiri iwepu foto nke McDonalds hamburgers, nke ejiri plastik na agba, tinyere nke Donkin Donuts, nke bu akwa akwa akwa ... ma si otua anyi ga - ejedebe 90% nke mgbasa ozi, nke na - eduhie ma ndi ahia ahia. ..
Zaghachi Iván Rolo
Victor Garcia Benet dijo
Emeghị McDonalds hamburgers plastik, a na-eji otu ihe ahụ dị ka hamburgers na-eme foto ndị ahụ, ihe dị iche bụ na onye na-ese foto na-akwụkwu ụgwọ na hamburger.
Zaghachi Victor García Benet
Nlọ ọrụ China jọgburu onwe ya nwụrụ!